China Ruoko Iron GT001 Kugadzira uye Fekitori | AOLGA
Nekushandisa hunyambiri kudziya tekinoroji, uye kufa-kukanda aruminiyamu ichishandiswa kune iyo ironing pani iyo inoshanda tembiricha inosvika 150 ℃, yayo ironing mhedzisiro iri nani pane yechinyakare imwe. Mhepo inokwira inosvika 26g / min inopinda mbatya ipapo kubvisa makwinya nekukurumidza. Iyo yakasarudzika basa re otomatiki yekuchenesa inogona kukweva chiyero uye nezvimwe zvisina kuchena mujenareta kuburikidza nehuya gomba, uye inoderedza iko kuvhara kwechikero, nokudaro ichiwedzera hupenyu hwayo hwekushanda. Kana pasina oparesheni kwemaminetsi gumi, muchina unozogura wega magetsi, uchiita kuti uve wakachengeteka.
Kudziya nekukurumidza muma30s panenge pasina chikonzero chekumirira.
Yakapetwa mubato inoitwa kuitira nyore kuchengetedza.
Kushandisa kunosanganisira zvese zvakadzika uye zvakarembera ironing.
Kuoma & kunyorova ironing
Iyo yakanyatso gadzira jira rako nyore mumwaka dzakasiyana.
Tangi hombe remvura
Yakakura uye inogona kutsauka tangi remvura ine huwandu hwe150ML inoita kuti zvive nyore kuwedzera mvura, uye iwe unogona kunaya zvipenga zvitatu kusvika zvishanu kana tangi rizere nemvura.
Yakakura yakawanda hutsi
Iyo yakakwira steam inogona kusvika 26g / min, iyo inopinda mukati mehembe uye nesimba inobvisa kuunyana. Iyo tembiricha yekupisa inogona kusvika kusvika ku180 ℃ iyo inogona kutapudza uye kubvisa mite uye hwema uku uchinyorovesa hembe.
Aluminium alloy ironing pani
Ceramic pendi pamusoro inoita aluminium alloy ironing pani kumeso uye kusimira-kusagadzikana.
Iyo yekucheka-kumucheto dhizaini yepaneru inogona kupinda mukati mabhatani, makorari uye zvimwe zvikamu kuti uwane yakadzama ironing.
Yechipiri yekupisa tekinoroji
Iyo yakasarudzika yechipiri yekupisa tekinoroji inogonesa iyo ironing pani kuti iite yechipiri kupisa pamwe nekushisa kunosvika kusvika ku150 - kuunza zvirinani kuunyana kubvisa.
(Cherekedza: Iyo tembiricha yeiyo ironing pani yenguva dzose yenguo yesimbi ingori ingangoita 100 ℃.)
Otomatiki kudzima kana pasina oparesheni kwemaminitsi gumi
Inozodzima yega (rega kupisa) uye ive yakamira kana pasina oparesheni kwemaminitsi gumi, inova yakachengeteka uye inochengetedza simba. (Moto kana mbatya dzakatsva dzinobva kumushandisi uyo anogona kunge asina hanya achisiya iyo isina-kudzima iron pahembe inogona kudzivirirwa.)
Otomatiki yekuchenesa basa
Iyo yakasarudzika otomatiki yekuchenesa basa inogona kukonzeresa iyo limescale uye zvimwe zvisina kuchena mune yemhepo jenareta kuburikidza nehutsi gomba, kudzikamisa iko kuvhara, nokudaro kuwedzera hupenyu hwemuchina.
Iyo simbi inozvimisikidza yega kana iine yakanyanya kupisa tembiricha zvisingaite, nokudaro ichikupa yakachengeteka uye isina hanya mushandisi ruzivo.
Yakabata Ruoko Nguo Steam Iron
ABS + PC, Die-vakakanda aruminiyamu
Yakakura yakawanda yemhepo, Aluminium alloy ironing paneli, Kuchengetedza kupisa, Kuchenesa otomatiki
220-240V (Europe, China, Southeast Asia, South Korea, Australia nevamwe)
Yakapetwa: 222x94x122MM Vhura: 185.5x94x225MM
298x238x118MM (ruvara bhokisi)
Kuyera mukombe, Brashi, Mushandisi bhuku
Pashure: Kofi Muchina ST-511
Zvadaro: Magetsi Iron SW-103
Aluminium alloy pani Iron
Kuoma ironing Iron
Yakapetwa Curling Iron
Kupeta Ironing Bhodhi
Yakakwira tembiricha Iron
Laundry Iron Midziyo
Laundry Dzvanya Iron
Kurumidza kudziya-up Iron
Diki Steam Iron
Kuisa mvura kunyoro Iron
Magetsi Iron SW-605